Ukukhulumisana Voice – Isigaba – Windows – Vessoft
Ukukhulumisana Voice – Windows
Ukukhulumisana Voice Ewebhu Isofthiwe ethandwa kakhulu ukuxhumana nabangani emhlabeni jikelele. Isofthiwe kuqinisekisa a izinga okusezingeni lonke izwi video zokuxhumana, futhi ukushintshana elula imiyalezo.
Ukukhulumisana Voice Ewebhu Isofthiwe ukwenza izwi noma amakholi wevidiyo uphinde uthumele imiyalezo. Kukhona contact ukuvumelanisa okuzenzakalelayo zedivayisi umsebenzisi.
Ukukhulumisana Voice Ewebhu Ithuluzi ukuxhumana abasebenzisi emhlabeni wonke. Isofthiwe ikuvumela ukuba wenze izingcingo ngezwi futhi ukuxhumana in the mode of yenkomfa yevidiyo.
Ukukhulumisana Voice Ewebhu Ithuluzi for the ukuxhumana phakathi abasebenzisi emhlabeni wonke. Isofthiwe ikuvumela ukuba wenze amakholi wezwi, video izingcingo kanye nombhalo exchange imiyalezo.
Ukukhulumisana Voice Ewebhu Ithuluzi lokwenza izwi kanye video ubiza emhlabeni wonke. Uhlelo ikuvumela ukuba wenze izingcingo ku-Mobiles kanye landlines.
Ukukhulumisana Voice Isofthiwe for the zokuxhumana ngezwi nabangani kanye nabanye abasebenzisi kunoma iyiphi ibanga. Futhi isofthiwe kwenza ukudala iziteshi zakho siqu izwi.
English, Українська, Français, Español... Mumble 1.2.12
Ukukhulumisana Voice Chat Ewebhu Ithuluzi for umbhalo, izwi kanye video imiyalezo. Isofthiwe ikuvumela ukuba wabelane amafayela bese wengeza abasebenzisi oxhumana nabo kusuka kwezinye izinhlelo zokusebenza.
Ukukhulumisana Voice Chat Isofthiwe ukuzwakalisa futhi umbhalo ukuxhumana nabanye abasebenzisi. Isofthiwe kwenza ukusetha iphasiwedi ukufinyelela ukuxoxa futhi ulungiselele ibhokisi lengxoxo izidingo umsebenzisi.
Ukukhulumisana Voice Ithuluzi Elula ukuxhumana ngokusekelwa kwemisebenzi ethandwayo. Isofthiwe ikuvumela ukuba wenze izingcingo ngezwi, umbhalo exchange imiyalezo namafayela.